Bayaan ay Jaaliyadda Absame ee Denmark ka soo saartay dadkii Hargaysa lagu xidhxidhay
08 December 2003 | Faafin 09 Dec 2003
Maalintii axadda ahayd ee taariikhdu ahayd 07 December 2003, waxaa kulan degdeg ah isugu yimid xubnaha Jaaliyadda Absame ee Denmark, kuwaasoo ka wada-hadlay jawaabtii laga bixin lahaa dadkii rayadka ahaa ee maamulka Hargaysa uu dhawaan xabsiga ku guray, isagoo ku andacoonaya in dadkaasi ay xubno ka yihiin Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogadenya.
Ma aha markii ugu horraysay ee maamulka Hargaysa uu dhibaatooyin kala duwan u gaysto dadwayne u dhashay dhulka Ogadenya. Maamulka Hargaysa wuxuu caadaystay inuu si bani’aadamnimada iyo soomaalinimada ka baxsan ula dhaqmo dadka rayadka ah ee soomaalida Ogadenya ee siyaabaha kala duwan u yimaadda gobollada Woqooyiga Soomaaliya, wuxuu kaloo caadaystay inuu dadkaas qaqabto oo gacanta u geliyo dawlada gumaysiga Itoobiya, isagoo hanti iyo dano kale oo siyaasadeedba kaga beddasha.
Dadwaynaha Absame, meel kastoo ay joogaanba, waxay in badan indhaha ka daboolanayeen xadgudubyada uu nidaamka Hargaysa u gaysto dadwaynaha Absamaha ah, iyagoo tixgelinayay soomaalinimada iyo xidhiidhka qoddada-dheer ee labada dadwayne ka dhaxeeya, hase yeeshee waxay hadda ku qasban yihiin inay falcelin adag ka bixiyaan dhaqankan foosha xun ee nidaamka Hargaysa uu caadaystay. Sidaas darteed waxay Jaaliyadda Absame ee Denmark, iyadoo xoojinaysa mawqifka ay Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogadenya arrintan ka qaadatay, soo saartay go’aamadan soo socda:
1- In maamulka Hargaysa uu sida ugu dhakhsaha badan, shuruud la’aan ugu sii daayo dhammaan dadkii rayadka ahaayee uu xidhxidhay dabayaaqadii bishii hore ee November.
2- Inuu ka waantoobo dibin-daabyada uu ku hayo dadwaynaha soomaalida Ogadenya iyo dagaalka cad ee uu kula jiro qadiyada xaqa ah ee dadwaynaha soomaalida Ogadenya.
3- Inuu joojiyo u garbaynta cadowga, ogaadana hiillada uu cadowga Itoobiya u hiilanayo inay tahay colaad uu dadwaynaha soomaalida Ogadenya ugu baaqayo.
4- Jaaliyada Absame ee Denmark waxay dadwaynaha soomaalida Ogadenya ugu baaqday inay gooyaan dhammaanba xidhiidhada ay la leeyihiin gobollada Woqooyiga Soomaaliya, mid dhaqaale iyo mid bulsho labadaba.
5- Jaaliyadu waxay kaloo dadwaynaha Absame ugu baaqday, meel kastoo ay joogaanba, inay xayiraan hantida ay leeyihiin dadyowga ku xidhan maamulka Hargaysa ee deegaannadooda ku sugan, inta uu maamulkaasi ka sii daynayo dadka rayadka ahee uu xabsiyada ku hayo.
6- Jaaliyada Absame ee Denmark waxay dadwaynaha soomaaliyeed oo dhan ugu baaqday inayna indhaha ka daboolanin xadgudubyada uu maamulka Hargaysa ku hayo dadka soomaalida ah ee u dhashay gobollada aan Woqooyiga Soomaaliya ahayn, isla markaana ay ka dhiidhiyaan falalka waxshinimada ah ee nidaamkaasi uu soomaalida dhexdeeda ka wado.
7- Jaaliyada Absame ee Denmark waxay ka xun tahay in waxgaradka iyo masuuliyiinta Woqooyi Galbeed ayna ilaa iyo hadda la imaanin mawqif ay ku diiddan yihiin dadka soomaaliyeed ee lagu waxyeellaynayo gobolladooda, iyo kuwa cadowga laga gadanayo, sidaas darteed waxay ula muuqataa inay arrintan ku raacsan yihiin maamulka Hargaysa.
Jaaliyadda Absame ee Denmark
Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh Jaaliyadda Absame ee Denmark